प्रतिनिधि सभा चुनावको सिफारिस मैले होइन, संविधानले गराएको हो: प्रधानमन्त्री ओली (भिडियोसहित) – kalikadainik.com
प्रतिनिधि सभा चुनावको सिफारिस मैले होइन, संविधानले गराएको हो: प्रधानमन्त्री ओली (भिडियोसहित)
शुक्रबार, आषाढ ११, २०७८ | ८:५६:०३ |
काठमाडौं । दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । यही बीचमा तीन साताअघि भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि राजनीतिमा नयाँ तरंग थपिएको छ । पार्टीकै एउटा पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएर सरकारविरुद्धका क्रियाकलापमा सहभागी भएका बेला एमालेको एकता कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भ पनि उत्तिकै जिज्ञासाको विषय बनेको छ । यिनै सेरेफेरोमा रहेर प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले गर्नुभएको ‘विशेष संवाद’को सम्पादित अंशः
संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार तपाईंले गर्नुभयो । तर, प्रतिनिधि सभा त राजनीतिक अंग हो, यसले राजनीतिक कोर्ष निर्धारण गर्ने हो । संवैधानिक औचित्यले तपाईंलाई निर्देशित ग¥यो । राजनीतिक औचित्य पनि त प्रमाणित गर्नुप¥यो नि हैन ?
२०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेँ । त्यसमा मैले कारणहरु बताएको थिएँ । संसद् वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यो त पुष्टि भयो । वैकल्पिक सरकार दिन्छौं भनेर अविश्वासको प्रस्ताव छल्नका लागि विघटन गरेको आदि इत्यादि भनियो । संसदमा विकल्प हुँदा हुँदै विघटनमा प्रधानमन्त्री गएको आरोपसाथ विपक्षीहरु मुद्दामा गए । अदालतले त्यसलाई पत्यायो । पुनस्र्थापित भयो । पुनस्र्थापित भएपछि न अविश्वासको प्रस्ताव कसैले राख्न सक्यो । विरोधको खेती बेस्सरी गरिरहँदा पनि समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा पनि भएन । संसदले काम गर्न सकेन । श्रद्धाञ्जलि दिँदै उठ्दै हिँड्ने काम जस्तो भयो । संसदले वैकल्पिक सरकार दिन सकेन । विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरुले वैकल्पिक सरकार दिन सकेनन् । अविश्वासको प्रस्तावसमेत राख्न सकेनन् । काम गर्न पनि दिएनन्, दिने स्थिति पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा मैले ममाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छै कि छैन हेर्नुप¥यो । यदि विश्वासको मत छैन भने संसदले विश्वास दिँदैन भने राजनीतिक कोर्ष लिन्छ । म देख्छु, प्रतिपक्षले बहुमत पु¥याउन सकेर आउने अवस्था पनि छैन भने देश चुनावतिर जान्छ । चुनावमा जाने स्थितिमा जनताको बीचमा उहाँहरुको स्थिति बेहाल छ । उहाँहरु जनतामा जाने कुरा गर्नेवित्तिकै तर्सिनुहुन्छ । फेरि राजनीतिको फैसला गर्ने ठाउँ भनेको जनता हो । जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने, फैसला गर्ने ठाउँ संसद हो । जनप्रतिनिधि र राजनीतिक थलोबाट गर्नुपर्नेमा उहाँहरु पटक पटक त्यसभन्दा बाहिरको निकाय र थलोमा जानुभयो । जनतामा जाने कुरामा, जनताको मूल्यांकनमा आउने, जनादेश लिएर बढ्नुपर्नेमा अवरोध गरेर त्यसको निर्णय निरुपण अन्त्यत्रैबाट गराउने उहाँहरुको अभ्यास छ । त्यसै गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा छ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्यौलमा नपारौं, फेरि चुनावमा जाने अवस्थामा नजाऔं भनेर संसदमा मलाई विश्वासको मत दिनुस्, संसद कायम राखौं र अघि बढौं भनेँ । प्रतिनिधि सभा अदालतले पुनस्र्थापना गरिसक्यो भने अब यसलाई असफल हुन नदिऊँ भनेर आहवान गरेँ । तर, स्वार्थमा जब मान्छे एकोहोरो भएर लागेको हुन्छ, त्यतिबेला तर्क, बुद्धि केहीले काम गर्दैन ।
विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सन्दर्भमा संविधान बनाउने बेला सकेसम्म पूरा कार्यकाल पाँच वर्ष नै प्रतिनिधि सभा बसोस् भन्ने परिकल्पना ग¥यौं । धारा ७६ को १, २ र ३ सकिइकन फेरि ७६ (५) पनि जोड्यौं । धारा ७६ (५) भनेको जसले सक्छ उसले देखाओस् भनेर स्वतन्त्ररुपमा पुष्टि गर्न सकिने हो भन्ने पनि गरिएको छ । त्यसका लागि १४६ जनाको हस्ताक्षर गइसकेको थियो । एउटा स्टेपलाई रोकियो भन्ने तर्क छ नि ?
म अघिल्लै प्रश्नमा केही थप्छु । संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने प्रणाली रहिन्जेल दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्थामा भरसक बहुमत आउन सम्भव छैन । नेपाललाई अस्थिरतामा राख्ने प्रबन्ध पहिल्यै नै घुसाइएको छ । दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर नै नेपालमा सरकार बनाउने हो । नेपालजस्तो राजनीतिक संस्कार कमजोर भएको ठाउँमा धेरै भरपर्दो हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने ठाउँमा त्यो प्रधानमन्त्री छानिरहने अवस्था र प्रधानमन्त्री फेरिने, सत्तारुढ दल फेरिनेमात्रै होइन, निर्वाचनमा जाने त अनिवार्य हुन सक्छ । प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री छानिने अवस्था भएपछि दुई वर्ष अविश्वास राख्न नपाउने भनेको दुई वर्ष ढुक्क भएर काम गर्न दिने अवस्था छ र ? एक महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री असफल हुन सक्छ । सरकार गठन हुन सक्दैन । चुनावपछि तुरुन्तै प्रधानमन्त्री हुन सक्छ । बहुमत आएन, दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन भएन भने देश स्वतः निर्वाचनमा गएन ? ठूलो दलको हैसियतले ३० दिनमात्र हो चलाउन पाउने, तीस दिनमा त विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वास पाउँदैन, त्यसपछि गएन चुनावमा ? बहुदलीय प्रणालीको विरुद्धको व्याख्या जुन गर्न खोजिएको छ, धारा ७६ (५) मा पुगेपछि दलीय प्रणाली काम लाग्दैन, निर्दलीय प्रणाली हुन्छ । अनुशासित होइन, अनुशासनहीनता, बेइमानी, आफ्नो दलसँगको विश्वासघात र अर्को दलप्रतिको आकर्षण अथवा सांसदहरु स्वार्थ, लोभपापमा बिक्ने भए । किनिने भए । हङकङ पठाउन सकिने भयो । यस्ता कुराहरुको ब्याख्या हुन खोजेको छ– स्वतन्त्र ढंगले सांसदहरु गर्न पाउँछन् । अब गठन हुँदा स्वतन्त्र हुन्छ । विश्वासको मत लिँदा स्वतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन ? यी तर्कहरुका पछाडि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कसको नेतृत्वमा चुनाव जाने भन्नेमात्रै हो । यो संवैधानिक प्रश्न हुँदै होइन, यो राजनीतिक प्रश्न हो । कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्ने हो । वैकल्पिकरुपमा उहाँहरुले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो अवैद्य र अनुचित छ । संविधानअनुसार छँदै छैन । त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्थिति छैन । त्यो स्थितिमा जुन बखेडा निकालिको छ । त्यो सबैलाई थाहा छ । यो हुने कुरा होइन । तर लडाइँ केमा गरिरनुभएको छ, कसको नेतृत्वमा जाने ? राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट फलानोलाई, फलानो दललाई हटाउनुपर्ने । त्यो संवैधानिक हुँदै होइन । पाँच वर्षको स्थायित्वको जुन परिकल्पना गरियो, ग्यारेन्टी गरिएन । परिकल्पना मैले गरेँ होला, तर संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था चाहिँ के छ ? स्थायित्वको व्यवस्था ग¥यो त ? स्थायित्वको ग्यारेन्टी ग¥यो त । सरकार बीचैमा होइन, तत्काल परिवर्तन, जहिलेसुकै परिवर्तन हुने सम्भावना राखेको छ । कतिपय संविधानका स्पष्टता नहुँदाखेरी जता पनि फैसला गर्दिने खालको ठाउँ छ । ठाउँ नचाहिने गरी ब्याख्या गर्न थालेपछि अब ठाउँ चाहियो भन्ने कुरा पनि भएन । यो राजनीतिक इस्यु हो । राजनीतिक इस्युमा अदालत प्रवेश नगर्ने नजिर पटक–पटक स्थापना भएको छ । यो राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक हिसाबले विघटनको सिफारिस गरेको छ, यसमा कोर्ट प्रवेश गर्दैन भन्ने नजिर छ । पहिलेका नजिर फलो नगर्ने, पछ्याउने होइन, नयाँ–नयाँ नजिर बनाउने गरिएको छ । हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ । अहिले जे चाहियो, त्यो गर्ने ।
मैले सिद्धिन लागेको, ४–५ सिट ल्याउन नसक्ने माओवादीलाई ४० प्रतिशत दिएर सहयात्रा गरेँ । माओवादीले जुन हैसियत प्राप्त ग¥यो, सिंह बनाएपछि तैंलाई खान्छु भनेर झम्टिन आयो । मैले एकता र एकीकरण गरेको थिएँ । कसका कति मान्छे होइन, एकताको भावना साथ एकीकृत पार्टीको निर्माण गरेको थिएँ । तर, त्यसको हैसियतको दुरुपयोग गरेर पार्टीभित्र अपवित्र, अनुचित, अस्वस्थ्य, हानिकारक र अनैतिक खालको गठबन्धन गरियो । कम्युनिष्ट आन्दोलन विश्रृंखलित र विघटित भएका बेला नयाँ एकीकरणको अभियान थालेर यहाँसम्म ल्याइपु¥याउने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकजुट बनाउने कामको अभियान सुरु गरेको थिएँ । म तत्कालिन एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको थिएँ, त्यसलाई महाधिवेशनले मात्रै हटाउन सक्छ । तर यहाँ अस्वस्थ्य र अनुचित गठबन्धनबाट त्यस्तो साँठगाठबाट स्वार्थहरुको भागबण्डा गरेर, पदहरुको भागबण्डा गरेर मलाई नै अध्यक्षबाट निष्कासन गरेको घोषणा गर्ने काम भयो । म प्रथम अध्यक्ष मलाई जनकारी पनि छैन । मलाई कसैलाई सोध्दैन । तर निष्कासन गरेको अखबारबाट सुनिन्छ । यो तमासा मैले गरेको होइन । संसदीय दलको नेताबाट हटाएको होइन ? एउटाले दोस्रो अध्यक्षको पगरी फ्याँक्छ, पहिलो अध्यक्षको लगाउँछ । पगरी नभएकाले दोस्रो अध्यक्षको पगरी टिपेर लगाउँछ । संसदीय दलको नेताबाट हटाएर दलको नेताको पगरी लगाएको देखियो । त्यतिले धित मरेन । पुच्छर चटपटाउँछ । पुच्छर चटपटायो भने जिउँदो हुन सक्छ । बाघ जबसम्म घोप्टो रहन्छ, होसियार हुनुपर्छ भनेर घोप्टो पर्न पनि दिनुभएन । पुच्छर चटपाउन पनि दिइएन । साधारण सदस्यबाट पनि हटाइयो । जतिबेला नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन असक्त अवस्थामा पुगेको थियो, त्यस्तो अवस्थाबाट आन्दोलनलाई एउटा शंखघोषका साथ पुनर्जिवन दिएर नयाँ अभियानको रुपमा अघि बढाउनेमध्ये एक म पनि हुँ । मलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निकालियो । के अपराध भन्दा कम्युनिष्ट पार्टी मिलायो, कम्युनिष्टले झण्डै दुई तिहाइका सरकार बनायो, विकासको काम तीब्र गतिका साथ अघि लाग्यो, नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी ग¥यो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि–पहिचान बनायो, भिजनसाथ देश चलायो भनेर । म भन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरुले देशको विकासको बारेमा, देशको भिजनको बारेमा, अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृतिलाई समेत राजनीतिमा समटेर ड्राइभ गरेको कहिल्यै सुन्नुभएको थिएन । कहिल्यै कुनै प्रधानमन्त्रीले विकासलाई भिजनका साथ अघि बढाउने, दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको अथवा त्यसअनुसारका अभ्यास गरेको, त्यस अनुसारका नीति र व्यवहार देख्नुभएको थियो कहिल्यै ? त्यो त नेपालको इतिसहामा म पहिलो प्रधानमन्त्री होला विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर चर्चा गरेँ, भिजन दिएँ । विकासलाई साथी बनाएँ । कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सबल बनाएवापत मेराविरुद्ध अभियान चल्यो ।
म त्यही भन्दैथिएँ । नेकपा अर्काको नाममा दर्ता गरेकाले अर्को नाम ल्याउन भनिएको थियो । एकीकरण रद्द गरिएको थिएन । एकीकृत पार्टीको दर्तामात्रै खारेज भएको थियो । अदालतले निर्वाचन आयोगलाई आदेश दियो । नयाँ नामका साथ आउन निर्वाचन आयोगले १५ दिनको समय दियो । पार्टी विभाजन अदालतले गरेको होइन, हल्ला चलाइयो । नमागेको न्याय दियो भनिन्छ । कहाँ विभाजन ग¥यो ? एकीकरण पनि, विभाजन पनि अदालतले गर्ने होइन । अदालल प्रवेश गर्न मिल्दैन, गर्दा पनि गर्दैन, गर्नुहुँदैन पनि । अदालतले पार्टी अलग गरेको होइन । निर्वाचन आयोगले हामीलाई १५ दिनको म्याद दियो । मैले प्रयास गरेँ । नयाँ नामका साथ एकीकृत पार्टीलाई एकीकृतरुपमा अघि बढाऊँ भनेँ । तर, उहाँहरुलाई विभाजन चाहिएको थियो, उहाँहरुले पार्टी त विभाजन गरिसक्नुभएको थियो । दर्ता खारेजीको फैसलालाई सिरानी हालेर हामीलाई फटाइदियो भनेर सरसल्लाह, भेटघाट नगरी जानुभयो । विखण्डनकारी गठबन्धनलाई कायम राख्ने र त्यस संकल्पालाई कार्यान्वयन गर्ने विधि प्रक्रियासमेत तय गर्नुभयो । पार्टीमा आउनुभएन । पार्टीमा हाजिर गर्नुभएन । उहाँहरु दाम्लो छिनाएर हिड्नुभयो । मलाई उहाँहरुले निष्कासन गरे पनि, मैले गरिनँ । स्पष्टीकरण सोधेँ, तर रफ जवाफ दिनुभयो । उहाँहरुले फ्लोर क्रस गराउनुभयो, फ्लोर क्रस गर्नुभयो । बागी विद्रोही उठाउनुभयो, जिताउनुभयो । विपक्षीसँग मिल्नुभयो । पार्टीको टाउकोमा बन्चरोले, गर्धनमा तरबारले हान्नुभयो । ती छेकिए होलान्, हान्न त हान्नुभयो । अहिले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन भनेर प्रयास गरिरहेको छु । तर मेरो हातमा छैन । उहाँहरुले कहाँ–कहाँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, पछि खुल्ला । परिणामले देखाउलान् । विरुवा रोपेपछि उम्रिंदै गएपछि देखिन्छ, देखिने नै छ । त्यस्ता कुरा नहोऊन् भनेर पार्टीलाई एकजुट राख्ने प्रयास गरिरहेको छु । लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीचको एकता समझदारीका साथ जानुपर्छ, होइन भने खतरा छ । लोकतन्त्र भनेको सजिव प्रणाली त हो, तर त्यसलाई सजिव ढंगले चल्न दिएन भने खत्तम हुन्छ । त्यसको रक्षाका लागि सजग हुनुपर्छ भन्ने हार्दिक आग्रह गर्दछु ।